SIGESP: Nidaamka Maamulka Dadweynaha ee Isku-dhafan - Barnaamijka Bilaashka ah ee Shirkadaha Gaarka loo leeyahay | Laga soo bilaabo Linux
SIGESP: Nidaamka Maamulka Dadweynaha ee Isku-dhafan
SIGESP waa Nidaam Maamul oo si gaar ah ay ugu talagashay shirkad gaar loo leeyahay oo laga leeyahay dalka Venezuela Maamulka guud ee dalkaas. Magaceedu wuxuu ka yimid soo gaabinta soo socota: Nidaamka Maareynta Isku-dhafan ee Hay'adaha Dadweynaha (SIGESP). Waa barnaamij bilaash ah oo bilaash ah oo tusaale ugu noqon kara wadamada kale marka laga hadlayo Nidaamyada Maamulka Dadweynaha ee Maamuladooda Dowladeed.
Shirkadda gaarka loo leeyahay ee abuurtay SIGESP System, waxaa loogu yeeraa isla Software-ka, waxayna hadda ku jirtaa howsha Internationalization, waa Shirkad gaar loo leeyahay oo in ka badan labaatan (20) sano oo khibrad ah u leh horumarinta, la talinta iyo taageerida codsiyada maamulka ee suuqa Venezuela. Taas oo ina tusaysa suurtagalnimada iyo wanaagga markay shirkadaha ama dadaallada gaarka loo leeyahay soo saaraan Software Bilaash ah dhammaan meelaha.
Laakiin waa maxay faa iidooyinka ku soo kordhin kara hirgelinta softiweer gaar ah arrimaha maamulku waddan kasta, oo ay keligeed soo saarto ama shirkad gaar loo leeyahay ay ku sameyso waddankeeda? Hagaag, waxyaabo kale oo badan, hel wax soo saar hufan oo wax ku ool ah oo lagu taageerayo wax soo saarka, daahfurnaanta iyo fududeynta maareynta dadweynaha.
Iyadoo aan la tirinaynin waxtarka ay leedahay in la furo shaqooyinka Dawladda ama Maamulka gaarka loo leeyahay, Tababarida Tayada Aadanaha Tayada ee barnaamijyada iyo Maamulka.
Intaa waxaa sii dheer, xaqiiqda ah in Maamulka Dadweynaha ee waddan kasta uu leeyahay Software-ka Qaranka ee arrimaha maamulka ee Maareynta Dadweynaha wuxuu doorbidaa guud ahaan shaqada, ansaxinta iyo horumarinta dalabka qaabka maamulka iyo qaab dhismeedka sharciyeed ee maamulka qaran.
Oo waxay u oggolaaneysaa keydinta lacagta qalaad iyada oo la soo dejinayo badeecada, rukhsadaha iyo taageerada, iyadoo lagu darayo suurtagalnimada in laga dhigo mid ammaan ah oo la isku halleyn karo, iyo in la damaanad qaado adeegsiga ka fudud oo isku dhafan ee leh aaladaha kale ee dalka ee laga hadlayo halka laga hirgelinayo.
1 Waa maxay SIGESP?
2 Waa maxay SIGESP CA?
3 Maxay u soo bandhigi kartaa Barnaamijka Maareynta Dadweynaha Bilaashka ahi waddan?
4 Farsamo ahaan, sidee ayaa loo dhisay SIGESP?
5 Waa maxay astaamaha SIGESP Software-ka Bilaashka ahi ay leeyihiin?
Waa maxay SIGESP?
SIGESP marka loo eego abuurayaasheeda waa:
Una qalab maamul oo loogu talagay qaab fikradeed iyo sharciyeed oo loogu talagalay hay'adaha dawlada; Ujeeddadeedu tahay soo saarista macluumaadka xisaabinta iyo maaliyadeed ee go'aan qaadashada, oo lagu soo saaray fulinta miisaaniyadaha.
Taasi waa, waa nidaam isku dhafan oo fududeynaya hababka maaraynta maamulka ee ururada qaybaha bulshada halka laga fulinayo. Waxay ka kooban tahay qaybo taxane ah oo la jaan qaadi kara macmiil kasta, kuwaas oo maareeya hawlo kala duwan isla markaana si dhakhso leh oo deg deg ah jawaabo uga bixiya baahiyaha miisaaniyadda, hantida, xisaabinta iyo diiwaangelinta maamulka.
Waa maxay SIGESP CA?
SIGESP CA waa shirkad hogaamineysa la-talin, horumarin iyo hirgalinta Nidaamyada Isku-dhafan ee Maareynta Maamulka ee Ururada Waaxda Dadweynaha ee dalkeeda. Waqtigan xaadirka ah waxay sheegtay in shirkad gaar loo leeyahay ay ujeedadeedu tahay inay siiso xalka tiknoolajiyada weyn iyo tan ka wanaagsan suuqa qaranka iyo Latin Amerika
Iskusoo wada duuboo, aasaasida xulafooyinka istiraatiijiyadeed ee lagama maarmaanka u ah gudaha iyo dibedda Venezuela. taas oo lagama maarmaan u ah fulinta ujeedada la sheegay, sida, leh Da 'yar e La-tashiga Barakacayaasha.
Shirkadan softiweer ee bilaashka ah ee guuleysata waxay siisaa macaamiisheeda:
Horumar joogto ah oo shaqsiyeed iyada oo loo marayo koox xirfadlayaal ah si ay u taageeraan macaamiishooda qaabeynta, dib-u-injineernimada geeddi-socodka, rakibidda, la qabsiga, ballaarinta iyo maamulka maareynta maareynta maamulkeeda.
Tababar casri ah oo horumar leh iyada oo loo marayo barnaamijyo tababar si loo tababaro loona bixiyo aqoonta, aqoonta iyo kartida shaqaalaha u adeegsada Nidaamka waxqabadka Nidaamka.
Taageero hufan oo wax ku ool ah: Waxay leedahay dano gaar ah hawlgalka saxda ah ee xalalkiisa tikniyoolajiyadeed, taasi waa sababta ay uga go'an tahay inay ku siiso taageerada lagama maarmaanka u ah xallinta dhacdooyinka iyo dhibaatooyinka.
Maxay u soo bandhigi kartaa Barnaamijka Maareynta Dadweynaha Bilaashka ahi waddan?
Software Bilaash ah noocuu doono ha noqdee, laakiin gaar ahaan maamulka, wuu awoodaa in la siiyo urur kasta oo dawladeed ama mid gaar loo leeyahay u hoggaansamida sida ugu macquulsan ee sharciyada hadda jira ee waddanka ay ku taal, iyo Ujeeddooyinka iyo Qaabka Ganacsi ee hay'adda dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee fuliya, iyada oo ay ugu mahadcelinayaan heerarkeeda furan.
Sidoo kale, Barnaamijka Maareynta Dadweynaha ee Bilaashka ah wuxuu ku siin karaa taageero hufan oo wax ku ool ah waxtarka, hufnaanta, amniga iyo fududeynta maamulka dadweynaha ee waddan kasta. Una oggolow si wax ku ool ah is-dhexgalka tikniyoolajiyadaha casriga ah ee kordhiya isla markaana dammaanad qaadaya kalsoonidiisa bulshada dhexdeeda.
Xaaladda gaarka ah ee Software-ka Bilaashka ah, SIGESP ee waddanka laga abuuray waxaa lagu waafajinayaa shuruucda (CRBV, LOAP, LOAF, LOPA iyo LOT) iyo ururada (ONAPRE, ONCOP iyo CGR) ee nidaamiya howlaha Maamulka Qaranka ee Qaranka (APN). Laakiin waa lala qabsan karaa wadan kasta oo kale oo qorshuhu yahay in laga hirgaliyo.
Laakiin marka la eego guud ahaan, SIGESP ama wixii kale ee Software-ka Maamulka Dadweynaha ee Bilaashka ah waxay u horseedi karaan heer sare oo wax-ku-oolnimo iyo wax-ku-ool ah howlaha maamulka dadweynaha., isla markaana kor loo qaado tayada adeegga ee shacabka (muwaadiniinta) iyada oo aan laga gaabinayn amniga iyo hufnaanta macluumaadka iyo geeddi-socodka la fuliyay.
Farsamo ahaan, sidee ayaa loo dhisay SIGESP?
Ka faa'iideyso adeegsiga luqadaha barnaamijyada la tarjumay, sida:
Barnaamijyada shabakadda taas oo u rogta barnaamij: macmiil / adeege.
Awoodda qaab-dhismeedka badan.
Fududeynta qalajinta iyo firfircoonaanteeda weyn, taas oo kordhinaysa waxqabadkeeda.
Dhismaha Software-ka casriga ah ku saleysan Muuqaalka Muuqaalka - Maamulaha (MVC)
Intaa waxaa sii dheer, SIGESP waxay ku hirgelisaa teknoolojiyad casri ah oo aad u shaqeynaya is-dhexgalkeeda., sida: maktabadaha EXT si loo wanaajiyo aragtiyada iyo ADODB si loo hagaajiyo isku xirnaanta keydka macluumaadka, taas oo u sii oggolaaneysa jiil saaxiibtinimo iyo karti leh oo warbixinno ah.
Waxayna adeegsanaysaa algorithm furaha sirta ah, kaas oo bixiya farsamooyin casri ah oo lagu ilaalinayo furaha helitaanka oo aad u ammaan badan. Amni aad u weyn heerka hawsha, taas oo macnaheedu yahay in magacyada faylasha la fulinayo iyo xuduudahooda aan la soo bandhigin.
Waa maxay astaamaha SIGESP Software-ka Bilaashka ahi ay leeyihiin?
Xalka la qabatinkara baahida iyo shuruudaha.
Module si buuxda isku dhafan.
Cusboonaysiinta nidaamka joogtada ah
U hoggaansamida adag ee xeerarka-cashuurta sharciga ee hadda jira.
Interface garaafis dareen leh oo si fudud loo isticmaali karo.
Nidaamka isticmaalaha badan.
Helitaanka nidaamka leh furayaasha amniga shaqsiyeed.
Amniga ugu badan iyo isku halaynta guud ee macluumaadka.
Warbixinno badan oo la cabbiro, loo dhoofin karo Excel iyo PDF.
Tiknoolajiyad casri ah oo loogu talagalay wax ka qabashada ugu habboon, dhakhso leh oo ammaan ah.
Macmiil / Adeeg Qaate.
Horumarka xasilloon ee qaangaarka ah ee PHP 5.
Fulinta darawallada keydka xogta Mysql 5 iyo Postgres 9.4
Multi-platform (Windows, Linux) oo ku saleysan Webka.
SIGESP waa waayo-aragnimo qurux badan oo guul leh, mar haddii dhinac laga eego waxay muujineysaa muhiimadda ay leedahay is-dhexgalka shirkadda gaarka loo leeyahay iyo Maamulka guud ee waddan ee dhinaca Horumarinta Barnaamijyada Qaranka, iyo kuwo kale oo badan.
Laakiin sidoo kale waxay ka tagaysaa rikoodh dhab ah oo wax ku ool ah oo ku saabsan sida ay faa'iido u leedahay horumarinta Software-ka Bilaashka ah oo ah badeecad laga iibsan karo Shirkad Gaar loo leeyahay.
Daabacadaha kale ee suurtagalka ah ee ku saabsan SIGESP, waxaan ku eegi doonnaa rakibideeda, qaabeynta, qaababkeeda, howlaheeda iyo xulashooyinka Nidaamka. Si kastaba ha noqotee, gudaha Websaydhka rasmiga ah ee SIGESP Waxaad codsan kartaa macluumaad aad u tiro badan oo dheeri ah oo ku saabsan Software-ka Bilaashka ah ee la yiri, soo degsigiisa, qaabeynta iyo Taageerada.
Waxaa xusid mudan in si sax ah ay tahay Taageero (fog ama fool-ka-waji) iyo tababar barta ugu adag ee la sheegay Software iyo Organization. Oo ugu fiican oo dhan, waxay leeyihiin a SIGESP demo internetka taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad sahamiso awoodeeda.
Waxaanan rajeyneynaa in tan ama barnaamijyada kale ee Maareynta Dadweynaha Bilaashka ah ee mustaqbalka ay kusii kordhayaan kuna guuleysanayaan waddan kasta., oo leh teknoolojiyad bilaash ah oo bilaash ah sida PHP7, MariaDB iyo Teknolojiyada Blockchain (Blockchain), oo loogu talagalay faa'iidooyinka Bulshooyinka, Dowladaha iyo Shirkadaha gaarka loo leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » SIGESP: Nidaamka Maareynta Dadweynaha ee Isku-dhafan - Barnaamijka Bilaashka ah ee Shirkadaha Gaarka loo leeyahay
Isticmaalaha aan faraxsaneyn dijo
Hadda waan hubiyey, mareegtuna mar dambe ma bixiso soo dejinta koodhka ilaha sidii ay yeeli jirtay qiyaastii 3 illaa 4 sano, sida ku xusan wixii la ii sheegay. Hadda waa inaad lacag bixisaa si aad u hesho xiriir si aad u hesho lambarka isha iyo keydka macluumaadka, aadna qaali ugu tahay kuwa doonaya inay isku dayaan.
U jawaab isticmaale aan faraxsanayn
Bixinta waxay u dhigantaa $ 1 lacagta qaran ee Venezuela, laakiin haddii aad u baahan tahay inaad wax badan ka ogaato SIGESP ama aad hesho waxyaabo dheeri ah, iskuday inaad sahamiso xiriiriyaha shabakaddan:
sandoval andres dijo
Waad salaaman tihiin fiidnimo wanaagsan, fadli, qof ayaa garanaya magaca iyo lambarka sirta ah ee demo ...
Ku jawaab andres sandoval
Xogta lagu galayo nidaamka:
Xiriir noocee ah ayuu nidaamkani la leeyahay SUGAU? Ma isku midbaa mise waa mid ka mid module ah midka kale?
Ku jawaab DM
Salaan, DM! SUGAU waa fargeeto SIGESP ah. Ahaanshaha Software-ka Bilaashka ah ee Venezuela, hay'adaha qaarkood waxay la qabsadeen oo ay wax ka beddeleen illaa heer loo tixgeliyo fargeeto. Tusaale ahaan: http://www.uds.edu.ve/sugau/sigesp_conexion.php
Anigu waxaan ahay La-taliye Hawleed Sare iyo La-taliye Farsamo, oo hadda ku nool Argentina. Haddii aad shaki ka qabto ama su'aalo aad qabtid waxaan joogaa adeeggaaga
Aad u fiican, waa waxa aan ugu baahanahay deg-deg
Ku jawaab daniel vergara